China Water Dabere nrapado N'ihi Softwood Woodworking rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Water dabeere nyagide maka softwood woodworking
Usoro: usoro SY6103
Ngwakọta agwakọta bụ 100: 10
Ngwa: ala osisi, ibo ụzọ na windo, arịa ụlọ, ọrụ aka
Ngwaahịa a bụ polymer copolymer polymer abụọ, ụdị ọhụrụ nke polymer monoisocyanate nke mmiri na-agbakwunye osisi mepụtara ma mepụta ya site na teknụzụ dị elu. Ezi mmiri na-eguzogide, ike njikọ dị elu, nchebe gburugburu ebe obibi, ma nwee nguzogide mmiri, nguzogide ihu igwe, ike njikọta ọsọ ọsọ, ọsọ ọsọ ọsọ, ezigbo ike, mmetụta nkwụsi ike, nwere ike ịgafe ule Japanese Agricultural Standard (JAS), ogo ike bụ ọkwa kachasị elu D4. Ngwaahịa a nwere a dịgasị iche iche nke ojiji, tumadi eji maka gluing laminated osisi ogwe, mkpuchi, osisi siri ike flooring, mejupụtara flooring, osisi ụzọ na windo, osisi siri ike na ngwá ụlọ, wdg, na nwekwara ike-eji maka mkpịsị aka nkwonkwo, njigide njikọ 45 Celsius C angled splicing na ndị ọzọ na osisi crafts rụpụta na ime mma, mma mama imekọ ihe ọnụ ụlọ ọrụ. Ngwaahịa a dabara adaba maka njikọta nke birch, anyụ, osisi na-acha akwụkwọ ndụ, fir na-acha uhie uhie, fir na-acha ọcha, mongolica, azụ azụ azụ, basswood, poplar na osisi ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma maka arụmọrụ dị elu.
Mongolian scotch paini
A na-emepụta jigsaw gluu nke nwere ihe abụọ maka njirimara nke ihe osisi na njirimara nke nrụrụ dị ukwuu n'ihi nsị na mmiri. Ọ nwere ike ịbanye n'ime osisi ahụ nke ọma, na gluu nwere usoro ihe nkiri magburu onwe ya na njikọta siri ike, ọkachasị ọ nwere ike meghachi omume na njirimara nke eriri osisi. Ndị otu a na-etolite njikọ kemịkal dị mma, nke na-edozi nsogbu nke nsị dị mfe nke ogwe osisi. Osisi siri ike puzzle gluu nwere vinyl polymer emulsion (latex) na polyisocyanate (onye na-agwọ ọrịa). Ya isi atụmatụ dị ka ndị.
1. 1. Ihe eji eme ihe na mmiri nke mmiri mejupụtara nke vinyl emulsion na aromatic polycyanate, nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, na nke na-enweghị ọkụ.
2. Akụrụngwa na ngwaahịa enweghị aldehydes, ọ nweghịkwa izizi formaldehyde na mmepụta na ojiji nke arịa ụlọ, nke na-agaghị emerụ ahụ.
3. Mgbe ị nyochachara, ịpị oyi na-ewe awa 1 ruo 2 iji gwọọ, na ịpị ọkụ na-ewe naanị nkeji ole na ole iji gwọọ, nke na-azọpụta ume na oge.
Anọ kwadoro tụgharịa jigsaw igwe
A-ekara jigsaw igwe
Fan agụba n'usoro jigsaw igwe
Igwe ihe eji eme ihe
Nnukwu ike ndọda, ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ngwaahịa dị n'ahịa, bọket nke gluu nwere otu ibu ahụ, ọkwa nke ụlọ ọrụ anyị dị ukwuu karịa ọtụtụ ngwaahịa dị n'ahịa, Ihe eji eme ihe dị elu.
Ngwakọta agwakọta nke isi ihe siri ike adịghị afụ ụfụfụ, ọ ga-ejikọ aka na-akpaghị aka mgbe oge ọrụ gasịrị (gel adịghị mfe nhịahụ), na-ezere mgbawa nke bọọdụ nke ndị ọrụ na-agbanwe gluu na gluu ka na-eji mgbe oge ọrụ.
Ogologo oge ọrụ
Ngwunye a gwakọtara ya na isi ihe siri ike nwere ogologo oge na-arụ ọrụ, a ga-ejikwa gluu ahụ edozi maka 1 elekere oge ọ bụla.
Magburu onwe tụnyere ule nke esi n'otu oge
Nke gara aga: Water Based nrapado N'ihi Ọkara Hardwood Woodworking
Osote: Materialgbọ mmiri Ihe Njikọ
Water Dabere nrapado N'ihi Ike Hardwood Woodwo ...